तपाईलाई थाहा छ दिपीकाले पद्मावतमा खेलेको शुल्क कति लिएकी थिइन् ?
अहिलेकी चर्चित तथा सबैभन्दा महँगी बलिउड हिरोइन दीपीका पादुकोणले फिल्म पद्मावतमा खेलेको शुल्क कति लिएकी थिइन् तपाईलाई थाहा छ ?
तपाईलाई लाग्ला १ करोड, २ करोड या पाँच करोड ! तर, त्यसो नभएर पादुकोणले उक्त फिल्ममा खेलेको १३ करोड शुल्क लिएकी थिइन् भने रणविर र साहिद कपुरले १०–१० करोड लिएका थिए ।
पद्मावतका निर्देशक संजय लीला भंसालीले पद्मावताका प्रमुख अभिनेता र अभिनेत्रीहरुका लागि उक्त शुल्क भुक्तान गरेका हुन् ।
पद्मावतको सफलता सँगसँगै दीपीका, रणविर र साहिद पनि १०० करोडको क्लवमा प्रवेश गरेको बताइएको छ । रणवीर कपुरले पद्मावत फिल्म भन्दा पहिला पनि अन्य फिल्मका लागि महँगो शुल्क लिने गरेको भएपनि १० करोड सबैभन्दा बढी शुल्क भएको बताइएको छ । दिपीका र रणविरजस्ता चर्चित कलाकारसँगको उनको उत्कृष्ट प्रदर्शनको सबैतिर चर्चा गरिएको थियो ।
अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमका अनुसार फिल्म पद्मावतमा राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका साहिदले आफ्नो हाल शुल्क बढाएर १ करोड पुर्याएका छन् ।
एक घण्टाकै परफरमेन्सको तीन करोड लिने को हुन् यी उर्वशी ? (हेर्नुहोस् भिडियोसहित)
तपाई यदि कलाकार हनुहुन्छ र कुनै आयोजकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा…
चारसय पच्चिस रुपैयाँमै सपरिवारले हेर्नुहोस् ‘छ माया छपक्कै’
चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’ अब डिश होमको सिनेमा घर च्यानल…
आँखा लाउन छोड अब कालापानीमा गीत सार्वजनिक
रमेश बाबुको ‘ एउटा कुरा सोधौ’ भिडियो सार्वजनिक
पप गायिका माया बुढाको आवाजमा ‘ जाउन छम्मा बारमा’ भिडियो